Ahoana no hampaharitra ny fiaranao - Victor Mochere
Fotoana famakiana: 11 mn novakiana
Manodidina ny 14 taona eo ho eo ny salan-taonan'ny fiara iray amin'ny fako, raha manakaiky ny 8 taona kosa ny salan-taonan'ny fiara eny an-dalana. Aza manahy anefa fa misy dingana tsotra azonao atao mba hanomezana ny moteranao ny vintana tsara indrindra hahatratrarana ny taonany. Nanangona lisitr'ireo toro-hevitra mora arahina izahay mba hampihenana ny fandaniana amin'ny fandehanana sy hitazonana ny fiaranao eny an-dalana mandritra ny taona maro ho avy.
1. Tehirizo ny batteran'ny fiaranao
2. Ovay tsy tapaka ny sivana
3. Mandeha milamina… matetika
4. Ampiasao ny fanamafisam-peo anao
5. Soloy ny fantson-tsetroka sy ny firaka
6. Asio rano tsy tapaka
7. Jereo ny kodiaranao
8. Mifikitra amin'ny fandaharam-potoanan'ny serivisy
10. Tazony ambany ny lanjany
11. Ataovy tsy harafesina ny fiaranao
12. Tohero ny fakam-panahy hanova
13. Fadio ny mitondra fiara amin'ny lavaka be sy ny lalan-kely
14. Ampiasao ny frein-nao mba hampihenana ny hafainganam-pandeha fa tsy hampidina ny fiaingana
15. Ataovy madio ny fiaranao
16. Fadio ny mametraka ny tongotrao eo amin'ny clutch ary ny tananao eo amin'ny tobin-tsolika
17. Aza lany ny solika
18. Aza asiana ampahany
19. Jereo avy hatrany ny jiro fampitandremana
20. Manaova fanamarinana tsotra sy tsy tapaka
Raha tsy mampiasa ny fiaranao mandritra ny fotoana maharitra ianao, dia hiharatsy ny bateria ary ho rava. Eritrereto ny fampiasana charger mitete mba hitazonana ny bateria ambony raha toa ka tavela ao anaty garazy mandritra ny fotoana maharitra ny fiaranao, na ny mpanadio batterie raha toa ka ambany kokoa noho ny mahazatra ny fiaranao. Raha toa ka tsy mandeha ny batterieo, ny tsy maintsy mitsambikina fiara dia miteraka tebiteby fanampiny amin'ny batterie ary mety hanimba ny rafi-pitantanan'ny motera sy ny fitaovana elektrônika saro-pady hafa: fihoaram-pefy avo roa heny noho ny fitomboan'ny akanjo. Mba hikarakarana ny batterie tsy misy charger, dia tokony hiezaka ny hitondra ny fiaranao farafahakeliny indray mandeha isan-kerinandro ianao raha azo atao - indrindra amin'ny ririnina.
Ny sivana menaka sy ny sivana rivotra ao amin'ny fiaranao dia lasa tsentsina rehefa mandeha ny fotoana, noho izany dia ilaina ny manavao azy ireo tsy tapaka. Tokony hosoloina izy ireo ho ampahany amin'ny serivisy fiara voalahatra, saingy asa tsotra ihany izy ireo - indrindra fa ny fanoloana sivana rivotra - ka azonao atao ny manandrana manandrana azy io ary mitahiry vola amin'ny dingana. Azonao atao matetika ny manalava ny androm-piainan'ny sivana rivotra amin'ny fanasana azy koa. Jereo ny bokinao raha mila torohevitra momba ny fanadiovana sy ny fanovana sivana, ary aoka ho azo antoka ny fampiasana kojakoja tena izy. Ny sivana mora sy ratsy kalitao dia mety hanimba ny moteranao mandritra ny fotoana maharitra.
Ny mitondra fiara miaraka amin'ny 'fahasoavana mekanika' dia zavatra tokony hataonao amin'ny fotoana rehetra. Midika izany fa mampiasa ny fanaraha-mason'ny fiaranao ianao rehefa mahafantatra ny fomba fiasany. Ny fanaovana izany dia hampihena ny fitaovan'ny singa ary hampitombo ny solikao ianao. Ny zavatra tsotra toy ny fampiasana ny familiana, ny gearbox ary ny pedals dia zava-dehibe, miaraka amin'ny fijerena tsara ny mialoha mba hampihenana ny filàna tampoka. Ny mpitari-dalana anay ny fomba hitsitsiana solika manolotra toro-hevitra maro hafa hanatsarana ny fomba fitondranao mba hahazoana tombony betsaka amin'ny fiaranao sy ny toekarena solika.
Arakaraky ny maha-mahery vaika anao amin'ny pedals no mety ho avo kokoa ny vidin'ny solika sy ny fanamboarana. Ny fandehanana milamina dia tsara fanahy kokoa amin'ny fiaranao sy ny tontolo iainana, miampy ny fanafainganana sy ny fampihenana amin'ny fomba voafehy ary ny fiandrasana ny lalana eo aloha dia hamonjy vola amin'ny faktioran-tsolikao. Izany hoe, raha tsy mamerina tanteraka ny maoteranao ianao, dia mety hanorina sy handoto ny valva, ny tsipìka ary ny kojakoja hafa ny fametrahana karbônina, izay mampihena ny fahombiazany ary mety hiteraka fahavoazana.
Noho izany dia tokony havelanao hivezivezy amin'ny tsipika mena ny moterao, fara fahakeliny, indray mandeha isaky ny zato kilometatra vitsivitsy – fa rehefa mafana ny menaka ary eo amin'ny lalana mangina ianao. Ny fiara Diesel dia mety manana olana amin'ny sivana particulate diesel (DPFs) voasakana, izay natao hamandrihana ny entona setroka manimba. Ny fandehanana an-dalambe indray mandeha isam-bolana dia hanampy amin'ny fanadiovana azy ireo.
'Ampiasao na very' dia andian-teny azo ampiharina amin'ny fanamafisam-peo. Tsy azo ihodivirana ny fisian'ny entona fampangatsiahana rehefa mandeha ny fotoana, indrindra raha tsy ampiasaina tsy tapaka. Mety hitsitsy solika ny fialan-tsasatrao, fa mety hiafara amin'ny volavolan-dalàna momba ny famerenan'ny rivotra entona entona ianao. Ary eny, midika izany fa mamela tsindraindray hitsoka ny rivotra na dia amin'ny andro mangatsiaka aza.
Satria mihasarotra kokoa ny fiara, dia mazava ho azy fa tsy dia mirona hanao servisy manokana ny mpamily. Na izany aza, ny fanoloana ny fantson-tsetroka sy ny fitarihana mahery vaika dia asa tsotra hafa azonao atao mba hanatsarana ny fahombiazan'ny moteranao. Ataovy ao an-tsaina fa tokony hijery mialoha foana ny bokin'ny fiaranao ianao ary hifikitra amin'ny fandaharam-potoanan'ny serivisy. Rehefa manara-maso ny fantson-jiro, jereo fa misy:
Elektroda volontsôkôlà maivana sy insulator
Tsy misy famantarana mitsonika
Tsy misy famantarana ny akanjo na ny fametrahana
Ny fantson-tsetroka amin'ny toe-javatra ratsy dia manondro ny fiaro rehefa mandeha ny fotoana ary mila soloina, na mety manondro ny toetry ny moteranao. Raha toa ka somary vaovao ny plug ary niteraka elanelana lehibe eo amin'ny electrode sy ny insulator, dia mety ho famantarana fa tsy mandeha ny maotera. Raha izany no izy, dia tokony hijery ny garazy eo an-toerana ianao. Raha toa ka misy triatra na misy soritr'aretina ny firaka dia tokony hosoloina. Manoro hevitra izahay hampiasa garazy malaza hanatontosana izany, na izany aza, raha manana traikefa ianao ary matoky tena, dia azonao atao ny manao izany raha mbola manaraka ny torolalan'ny fiaranao ianao. Ity teboka ity dia tsy mihatra amin'ny fiara gazoala satria tsy mampiasa palitao izy ireo.
Ny ranon-javatra no ain'ny fiaranao ary ny tsy famenoana azy dia mety hisy vokany ratsy. Hamarino indray mandeha isan-kerinandro ny menaka maoteranao amin'ny fanokafana ny satroka (miaraka amin'ny fiaranao amin'ny tany lemaka) ary esory ny dipstick. Omeo fafao amin'ny lamba izy dia atsoboka. Rehefa tafaverina izy dia tokony ho eo anelanelan'ny marika faran'izay kely sy ambony indrindra ny haavon'ny menaka – ary loko volontsôkôlà mavo mavo raha misy motera lasantsy ny fiaranao. Tokony hosoloina menaka maizina sy maloto.
Na izany aza, ny menaka motera diesel dia miangona ho ao anatin'ny dingan'ny fandoroana mahazatra, ka ny menaka loko maizina dia tsy mahatonga fanairana amin'ny fiara diesel. Ny faritra hafa tokony hojerena indroa isan-kerinandro dia ahitana ny fitahirizana rano mangatsiaka, izay tokony hamenoanao rano voadio 50% sy antifreeze 50%, ary ny tavoahangy fanasan-drivotra. Manoro hevitra ny fanasan-damba novidin'ny fivarotana ho an'ity farany ity. Aza alaim-panahy hampiasa ranon-javatra fanasan-damba fa misy sira sy zavatra fanampiny hafa manimba ny loko.
Ny pneu dia azo lazaina fa singa fiarovana lehibe indrindra amin'ny fiaranao ary tsy manitatra ny filazana fa ny fanaraha-maso azy ireo tsy tapaka - indray mandeha isan-kerinandro - dia afaka mamonjy ny ainao. Mampitombo ny fanjifana solika koa ny kodiaran-tsolika ambany, noho izany dia tazony ho ambony araka ny toromarika voatanisa ao amin'ny bokin'ny fiaranao izy ireo mba hitsitsiana vola. Tadidio fa mety tsy hitovy ny faneren'ny kodiarana ho an'ny kodiarana aloha sy aoriana. Ny manam-pahaizana sasany dia manoro hevitra ny hanodina ny kodiaranao (izany hoe avadika ho any aoriana ny anoloana, ary ny mifamadika amin'izany) mba hanara-penitra sy hanalava ny androm-piainany.
Na izany aza, ho an'ny tombontsoan'ny fiarovana, dia manoro hevitra ny fampiasana kodiarana faran'izay kely indrindra amin'ny axle aoriana, satria mora kokoa ny mitantana ny fahaverezan'ny gripa eo anoloana (understeer) noho ny slider aoriana (oversteer). Jereo tsy tapaka ny haavon'ny fanitsahana amin'ny kodiaranao - tokony hieritreritra ny hanova azy ireo ianao rehefa eo anelanelan'ny 2mm sy 3mm izy ireo - satria ny fanitsahana kely anananao no tsy mahomby ny kodiarana. Ary aza adino ny mijery ny tosi-kodiarana koa, ary mitandrema sao misy tandroka na fahasimbana mety hiteraka fipoahana.
Tena ilaina ny serivisy tsy tapaka mba hitazonana ny fiaranao amin'ny toe-javatra faran'izay tsara sy hanalava ny androm-piainany. Ny elanelan'ny serivisy dia mifototra amin'ny fotoana na kilaometatra entiny - indray mandeha isan-taona na isaky ny 10,000 kilaometatra (16,093 km), ohatra. Jereo ny boky torolalana mba hahitana hoe rahoviana ny fiaranao no tokony hiasa sy ny asa ilaina. Fiara maoderina maro no manana jiro fampitandremana eo amin'ny solaitrabe mba hanairana anao rehefa ilaina ny fikojakojana. Amin'ny ankapobeny, tokony tetibola ho an'ny serivisy 'kely' indray mandeha isan-taona ianao ary serivisy 'lehibe' isaky ny roa na telo taona. Ny serivisy madinidinika dia ahitana ny fanovana ny menaka sy ny sivana solika, ary ny fanoloana ranon-javatra hafa raha ilaina.
Miankina amin'ny fiara sy ny halaviran-dalana, ny serivisy lehibe dia mety handrakotra ny fanoloana ny sivana rivotra, ny fantson-tsetroka ary ny cambelt. Ny isan'ny asa tafiditra ao anatin'ny serivisy kely na dia kely aza dia maro, fa ny rehetra dia tokony ahitana ny fisavana ny solika sy ny tsiranoka, ny fanerena sy ny toetry ny kodiarana, ny fivoahan'ny setroka be loatra, ny fiatoana amin'ny frein, ary ny fampandehanana tsara ny familiana, gearbox, clutch, fampiatoana, jiro, wiper ary tandroka. Toa fototra izy io fa ny fitazonana ny serivisy amin'ny fiaranao no zavatra tsara indrindra azonao atao mba hahazoana tombony betsaka amin'ny fiaranao sy hitazonana ny fahamendrehana. Ny fampiasam-bola amin'ny serivisy isan-taona dia hamonjy anao amin'ny faktioran'ny fanamboarana ary mety hisoroka ny fahatapahan'ny saina.
Maro amintsika no manana garazy, nefa firy no tena mampiasa azy ireny? OK, haverintsika indray izany: firy no tena mitahiry fiara ao anatiny? Rehefa miha-lehibe kokoa sy mahatohitra harafesina ny fiara, ny ankamaroany dia tavela eny amin'ny lalambe na arabe, ary ny garazy dia lasa fanitarana ny loft na ny zaridaina. Eny ary, hevero ity fialan-tsiny ho an'ny fialan-tsasatra ity. Ny fametrahana ny fiaranao ao anaty garazy dia mitazona azy ho maina, madio ary azo antoka, mampihena ny loza ateraky ny fahasimbana tsy nahy, ny fanimbana ary ny halatra. Mety hampihena ny saram-piantohanao mihitsy aza izany. Raha tsy mampiasa garazy ianao, dia mieritrereta mividy sarony fiara avo lenta - indrindra raha avelanao hijanona mandritra ny fotoana maharitra ny fiaranao.
Ny mpanamboatra maotera dia tsy mitsahatra mijery ny fomba hampihenana ny lanjan'ny fiarany mba hampitomboana ny kilaometatra isan-gallon sy hanatrarana ny fepetra takian'ny entona. Noho izany dia misy dikany lehibe ho anao ny mitazona ny lanja entin'ny fiaranao ho faran'izay kely indrindra na aiza na aiza azo atao. Ny fitondrana lanja fanampiny dia fomba azo antoka hanenjehana ny toekarenan'ny fiaranao. Hampisy rovitra fanampiny koa ny kodiaranao, ny frein ary ny fampiatoana. Ny vahaolana azo ampiharina dia ny manala ireo zavatra tsy ilaina amin'ny fiara. Atombohy amin'ny paosin'ny varavarana sy ny boaty fonon-tanana, dia jereo eo ambanin'ny seza ny kilalao na tavoahangy fisotroana.
Mandehana any amin'ny boot, esory izay rehetra tsy ilainao. Tsarovy fotsiny ny mamela ny kitapom-pitaovana, ny jack ary ny fanalahidin'ny kodiaran-kodiarana raha sendra misy loza. Tsara ihany koa ny mitazona kitapo fandravana ao, sao tsy vintana ianao ka rava. Halaviro ny fitazonana entana mavesatra sy zavatra rava ao anaty fiaranao rehefa tsy ilaina ary tandremo tsara rehefa manangona ny fiaranao ho an'ny fialantsasatry ny fianakaviana na dia lavitra. Ary aza adino ny manaisotra ny fitoeran'entana sy ny tafon-trano rehefa tsy ilainao intsony izany fa hanampy be dia be amin'ny fisintonana ny fiaranao sy hampiakatra ny fanjifana solika.
Ny fiara maoderina dia tena mahatohitra harafesina, fa ny harafesina vy no isan'ny mpamono fiara naorina tamin'ny taona 1990 na taloha. Raha vao tafapetraka izy io dia maro no tsy ho ara-toekarena amin'ny fanamboarana. Raha mahita tasy harafesina eo amin'ny fiaranao ianao, aza miandry ny hivoatra - fara faharatsiny, sarony amin'ny loko mipetaka ny hoditra mibaribary alohan'ny hanaovana azy indray amin'ny fomba matihanina. Mety hisoroka ny fahasimban'ny asa hoso-doko amin'ny voalohany ny fametrahana horonan-tsarimihetsika manaisotra vato eo anoloana. Azonao atao ihany koa ny manana ny chassis tsy mety harafesina, izay ahitana ny famenoana ny lava-bato amin'ny savoka natao mba hisorohana ny fidiran'ny rano. Tahaka ny toro-hevitra rehetra eto, afaka mitahiry vola ianao mandritra ny fotoana maharitra.
Ny fanovana ny fiaranao dia mety hahatonga azy tsy azo antoka sy hanafohy ny androm-piainany. Ny fanamafisam-peo ny motera mba hahazoana hery bebe kokoa dia miteraka tebiteby fanampiny amin'ny singa hafa, anisan'izany ny frein raha mitondra haingana kokoa ianao vokatr'izany. Ny fampiatoana mafy kokoa sy ara-panatanjahan-tena dia miteraka fanararaotana fanampiny amin'ny chassis, subframes ary kirihitra. Tadidio koa fa ny vola lany amin'ny fanovana dia mety tsy hampitombo ny sandan'ny fiaranao. Matetika ny mifanohitra amin’izany no marina. Satria ny fihenam-bidy matetika no sanda lehibe indrindra amin'ny fampandehanana fiara, tsy tokony hohamaivanina ny fampihenana ny vidin'ny fivarotana.
Ny lavaka dia manimba ny fampiatoana, ny kodiarana ary ny setroka. Ny sisiny mafy hita amin'ny lalana tsy voakarakara tsara dia mety hitarika amin'ny fibobohan'ny tamboho, fisarahana amin'ny tongotra ary amin'ny toe-javatra sasany dia mety hanala kodiarana koa izy ireo. Rehefa mandeha eo amin'ny lavaka sahala amin'ny vavahady, dia mety ho diso ny fampiatoana ary simba ny fiatoana. Ny lavaka lalindalina kokoa aza dia mety hanimba ny mpanova catalytic mitarika ho amin'ny lavaka sy fahaverezan'ny hery. Raha azo atao dia tsara kokoa ny mandeha amin'ny lalana malama kokoa mba tsy ho rovitra.
Ny faneken'ny motera, na ny fifindran'ny fiara mba hampihenana ny hafainganam-pandehanao, dia mety hanimba ny fiaranao, indrindra ny clutch sy ny fifindrana. Mety hanafohy ny androm-piainan'ny motera ny fampiasana ny fiainganao hisakanana rehefa mandeha, indrindra amin'ny hafainganam-pandeha ambony kokoa. Vao mainka hiharatsy ny fahasimbana raha ampidinina ny fiaingoana maromaro. Ny pedal frein-nao no namanao akaiky indrindra rehefa misoroka ny fahasimbana amin'ny boaty fiantsonanao ary tokony ho seranana voalohany hiantsoanao rehefa mampihena ny hafainganam-pandehanao.
Isika rehetra dia mahafantatra olona tsy manasa ny fiarany mihitsy (ary angamba ianao no iray amin'izy ireo), fa ny fitazonana ny fahadiovan'ny fiaranao dia tsy zava-poana: afaka manitatra ny fiainan'ny fiaranao koa izany. Tafiditra ao anatin'ny kojakoja mihetsika sy ny chassis ny grenady, ka mitarika ho amin'ny fanafainganana sy harafesina. Ny diky vorona dia mety manimba ny asa hoso-doko, ary ny sira eny an-dalana amin'ny ririnina dia tena manimba (koa ataovy azo antoka fa fantatrao ny tokony hatao rehefa mijanona ao ambadiky ny gritter).
Ny fanasan-damba mandeha ho azy dia manana borosy henjana izay mety hamela ratra kely - miampy tsikombakomba ihany koa. Fa ny fanasan-tànana, na ny asa DIY dia matetika kokoa. Mila sasana mialoha ianao alohan'ny hanaovana fanadiovana lalina kokoa ary tadidio ny mampiasa vahaolana fanadiovana mety fa tsy ranon-javatra manasa alohan'ny hanamainana ny fiara amin'ny chamois malefaka. Ny poloney isan-taona dia hanome fiarovana ary hisorohana ny harafesina tsy hiparitaka.
Zava-dehibe ihany koa ny fanadiovana ny ao anaty fiaranao amin'ny lamba mikraoba ary manala ny loto sy ny potipoti-javatra amin'ny tsihy. Ny fampiasana tifitra fiarovana amin'ny plastika dashboard dia mampihena ny mety hisian'ny vaky na ny loko, ary manampy koa ny fametrahana alokaloka eo amin'ny fitaratra amin'ny andro mamiratra. Toa miharihary izany fa ny fitazonana ny fiaranao madio sy ny feon'ny vatana dia hanampy amin'ny fitazonana ny toe-javatra misy azy sy hitazonana ny lanjany rehefa mivarotra sy mivarotra fiara vaovao.
Ny mpamily sasany dia mirona amin'ny fiara amin'ny tongotra mipetraka eo amin'ny pedal clutch. Izany dia manosika ny famotsorana ny clutch mifandray amin'ny fonon'ny clutch, izay mitarika ho amin'ny fikorontanana tsy ilaina. Rehefa mandeha ny fotoana dia mety ho simba aloha ny clutch. Toy izany koa, maka fanahy ny mametraka ny tananao eo amin'ny tobin-tsofinao eo anelanelan'ny fiovan'ny fitaovam-pitaovana, fa izany dia mihatra amin'ny fanerena amin'ny fikandrana sy ny kojakoja anatiny hafa. Manafaingana ny fahatapahan-jiro eo amin'ny boaty fiaingana ny fikorontanana fanampiny. Miezaha ho lasa fahazarana mamindra ny tananao eo amin'ny familiana ary apetraho amin'ny toerana hafa ao amin'ny footwell ny tongotrao havia.
Rehefa lany ny lasantsy ianao dia hisintona rivotra, potipoti-javatra ary antsanga hita ao amin'ny fanambanin'ny tobin-tsolika mba hanamafisana ny fiaranao. Ny fitaovana tsy ilaina dia mety hanakana ny rafitra ary mety hanimba ny paompy sy ny sivanao amin'ny farany, mety hanakana ny solika ary hisakana ny fiaranao tsy hanomboka. Ny tompon'ny fiara gazoala dia tokony hitandrina manokana amin'ny fatran'ny solika ambany satria ireo tsindrona mahery vaika ao amin'ny moterany dia misintona rivotra be dia be ao anaty rafitra, izay afaka manakana ny fihodinan'ny motera. Ny fitazonana ny haavon'ny solika dia afaka misoroka ny faktioran'ny fanamboarana lafo vidy eny an-dalana.
Mandany kilaometatra an-tapitrisany ny mpanamboatra ary mandany vola an'arivony tapitrisa amin'ny fikarohana sy fampandrosoana mba hahazoana antoka fa azo antoka ny fiarany. Koa nahoana no atahorana amin'ny kojakoja 'modely' ambany kalitao izany mba hamonjena vola kely fotsiny? Ny fampiasana kojakoja tany am-boalohany dia mety hamonjy anao amin'ny fotoana maharitra amin'ny fitazonana ny fiaranao eny an-dalana. Ary raha ny fiara mahazatra indrindra no resahina, ny fampiasana kojakoja tany am-boalohany no tena zava-dehibe amin'ny vidiny ho avy. Ny fanomezana ny fiaranao ny tsara indrindra dia mihatra amin'ny fluid ampiasainao. Jereo ny menaka maotera atolotra ao amin'ny boky torolalana ary, indrindra raha manana fiara mahomby mila solika 'premium' ianao (ohatra, super unleaded), ampiasao izany. Izany no nanamboarana sy novolavolaina ny fiara.
Mety ho mora ny tsy miraharaha ny jiro fampitandremana, indrindra rehefa toa tsy misy fahasamihafana eo amin'ny fiasan'ny fiaranao rehefa mirehitra. Na izany aza, ny famelana ny olana tsy voafehy dia mety hidika ho fiafarana aloha loatra ho an'ny fiaranao. Ny moteranao, ny frein ary ny jiron'ny familiana dia manondro ny sasany amin'ireo lesoka maika indrindra izay mety hitarika faktioran'ny fanamboarana lafo vidy na ratsy kokoa, toe-javatra mitondra fiara tsy azo antoka. Na dia hampihena ny fifehezanao ny fiara aza ny olana amin'ny frein sy ny familiana, dia mety hirehitra ny jiron'ny maotera noho ny antony maro.
Ny satroka famenoana malalaka na ny mpanova catalytic voapoizina dia voamariky ny hazavana iray ihany, ary ny tsara indrindra dia ny maka izay tsy azonao antoka amin'ny fanamarinana avy hatrany amin'ny manam-pahaizana. Tsarovy fa ny fomba fiambenana toy izany amin'ny tabataban'ny fiara tsy mahazatra dia hanampy amin'ny famahana olana amin'ny tsimokaretina, ary mety hampitombo taona ny androm-piainan'ny fiaranao. Tohizo hatrany ny dikan'ny jiro fampitandremana amin'ny dashboard fiaranao.
Ny iray amin'ireo fomba mahomby indrindra hanampiana ny androm-piainan'ny fiaranao dia iray amin'ireo mora indrindra: fisavana mahazatra. Ny lisitr'ireo fisafoana DIY tena ilaina dia hanamarika ireo olana alohan'ny hivoahany ho volavolan-dalàna fanamboarana lafo kokoa ary mety hanampy anao hampitsahatra ny fahasarotana mipoitra amin'ny voalohany. Manoro hevitra izahay hanamarina ireo tsy tapaka araka izay azo atao, angamba isaky ny tapa-bolana:
Fingotra (kodiarana sy famafana)
Sivana rivotra motera
Plug (motera lasantsy ihany)
Fitsipika ho an'ny fanombohana mahomby